Ucwaningo olusha lokukhuphuka kwamazinga olwandle | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Omunye wemiphumela ekhathaza kakhulu ukuguquka kwesimo sezulu ngukuthi ukukhuphuka kolwandle ngenxa yokuncibilika kwamakhekheba eqhwa asezindaweni ezibandayo. Amadolobha asogwini kakhulu angathinteka kakhulu ngalokhu kuphakama kolwandle. Yingakho kwenziwa izifundo ngokuqhubekayo ukuzama ukubikezela ukuthi lokhu kwanda kolwandle kungathinta kanjani.
Ucwaningo lwakamuva lucacisa ukuthi izinga lolwandle lingakhuphuka ukuphakama kwamamitha amabili ngonyaka wama-2100. Lokhu kusho izinselelo ezintsha zesayensi nezobuchwepheshe zokufuna ezinye izindlela zokuphatha nokuzama ukunqanda imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu nokunciphisa lokhu kukhuphuka kolwandle.
Lezi zilinganiso ezibikezelwe lolu cwaningo yilezi ithemba elincane uma siziqhathanisa nezinye ezenziwa ezifundweni ezedlule. Ukwazi okuguquguqukayo okuningi ngokuguquguquka kwesimo sezulu, lolu cwaningo lususelwa ekuqondeni kangcono ukuthi i-ice sheet yase-Antarctic yaziphatha kanjani esikhathini esidlule lapho kubhekene nezinye izinguquko zesimo sezulu sakudala kanye nokushisa komhlaba. Ngale ndlela, ukuhlaziywa kwendlela leli qhwa elizothinteka ngayo ekushintsheni kwesimo sezulu kwethu okuzayo kungenziwa.
Lezi zilinganiso zibeka izinselelo ezinkulu emphakathini wesayense nakwezombusazwe. Ucwaningo lushicilelwe ephephabhukwini Isayensi futhi lakhiwe ochwepheshe UMichael Oppenheimer wasePrincetown University noRichard Alley wasePennsylvania State University. Kubo, ubunzima obukhulu obudalwa ukukhuphuka kwamazinga olwandle butholakala kulabo bantu okufanele benze izinqumo ngezinqubomgomo ezisogwini zamadolobha. Ubunzima ukuthi ukuthatha izinqumo kumele kwenziwe kususelwa ku ukubikezela kwesayensi nokuqagela lokho kungenzeka noma kungabi nayo umkhawulo wephutha futhi okungahluka ngokushesha kuye ngomsebenzi owenziwe wokulwa nokuguquka kwesimo sezulu emhlabeni jikelele.
Kubuye kube nobunzima kososayensi ngoba ihlala kubo umthwalo omkhulu ukukwazi ukukhiqiza lezi zilinganiso ngomkhawulo omncane kakhulu wokungaqiniseki ukuze kwenziwe ukubonakala kwesikhathi esizayo ngokunemba okukhulu kakhulu.
Esinye sezizathu eziyinhloko zokungaqiniseki kwalezi zibikezelo nobunzima bokubikezela yizo imisinga yeqhwa. Izinguquko ezingeni lolwandle zikhawulelwe emisakazweni yeqhwa. Imisinga ye-Glacial yizindawo zamashidi eqhwa ahamba ngokushesha okukhulu kunalo lonke iqhwa elibazungezile. Imvamisa zakhiwa yiqhwa futhi zihamba ngesivinini esikhulu. Kwesinye isikhathi ingafinyelela isivinini ka-1 km ngonyaka.
Ochwepheshe kulolu cwaningo babheka ukuthi izibalo ezenziwe nge-ice sheet yase-Antarctic zisenele futhi zinzima. Ngale ndlela bakhawulela ukuqonda ngokomzimba nokubikezela. Ngokuya ngocwaningo abasuselwe kulo kulo mbhalo, isifunda seqhwa laseThwaites, eNtshonalanga Antarctica, sizoba yindawo engenzeka kakhulu yokulahlekelwa yiqhwa ngokushesha nemiphumela yako umthelela ezingeni lolwandle. Le ndawo, eselwandle i-Amundsen, ithintwe ukuhlehla okuqhubekayo nokusheshisa kwezinguzunga zeqhwa.
U-Oppenheimer uthe badinga uhlelo locwaningo olugxile emkhakheni nasekubhekeni izingxenye ze-Antarctica ukuthi zisengozini enkulu emiphumeleni yokuguquka kwesimo sezulu. Itheku loLwandle i-Amundsen ligcizelelwa ngokukhethekile njengoba liyindawo engazinzile kangako. Yize bekholelwa futhi ukuthi ngokwanda kwamazinga olwandle nokubikezela kwakho kwesikhathi esizayo, akufanele bagxile kuphela e-Antarctica kepha futhi IGreenland
Lesi simo ngokuzayo sigqugquzela inhlanganisela yamamodeli okubikezela nokubuka okukhombisa ukuvela kwezinguzunga zeqhwa nokukhulisa ukunemba. Ukuze ukwazi ukuyibuka kahle kufanele gcina futhi wandise ukuqapha kwesathelayithi ngenhla kwamashidi eqhwa ukubona kangcono ukuphakama kolwandle.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ukutadisha okusha kokukhuphuka kwamazinga olwandle
ULauri Y. Orozco Rada kusho
Imininingwane emihle kakhulu.
Phendula uLauri Y. Orozco Rada